တစ်ဦးကောင်းစမ်းသပ်ခြင်း-Taker ဖြစ်လာစေရန်4နည်းလမ်းများ
သငျသညျအစဉျအမွဲ "ငါအကောင်းတစ်ဦးစမ်းသပ်-taker ဘူး" သို့မဟုတ်ကပြောသည်ကြလျှင် "ငါသည်ရုံစမ်းသပ်မှုအပေါ်ကောင်းစွာမလုပ်ကြပါဘူး," ထို့နောက်သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုမှပိုကောင်းလစာအာရုံစူးစိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ၏သင်တန်းကိုသင်လေ့လာဖို့မရှေးခယျြသောင့်လျှင်, သင်ကစမ်းသပ်မှုအပေါ်ကောင်းသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်အချို့မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများရှိပါသည်သင်ပင်ကြောင်းစမ်းသပ်မှုလျှင်, သင်၏စမ်းသပ်-ယူပြီးစွမ်းရည်တိုးတက်စေနိုင်သည် - တစ်ပြည်နယ်စမ်းသပ်မှု SAT , ACT , GRE , LSAT သို့မဟုတ်ပဲသင့်ရဲ့ပျှမ်းမျှ Run-Of-The-ကြိတ် မျိုးစုံရွေးချယ်မှု ကျောင်းစမ်းသပ်မှု - မနက်ဖြန်တက်လာမယ့်နေပါသည်! အံ့ဖွယ်ကဲ့သို့မြည်? ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင်တစ်ဦးမှတစ်ဦးဒီတော့-ဒါစမ်းသပ်မှု-taker ဖြစ်ခြင်းကနေသွားဖို့စဉ်းစားခြင်းထက်ပိုလွယ်မယ့် ကောင်းသောစမ်းသပ်မှု-taker ။ သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်ခြင်းဂိမ်းတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့အောက်ပါနည်းလမ်းများမှာ peek ယူပါ။
သင်ကိုယ်တိုင် Labeling ရှောင်ကြဉ်ပါ
Getty Images | Kondoros အင်း Katalin
ပထမဦးဆုံးအနနှေငျ့သငျသညျ schtick "ငါသည်ကောင်းတစ်ဦးစမ်းသပ်-taker ဘူး", ထိုမြေတပြင်လုံး drop ချင်တာပေါ့။ တစ်သိမြင်ပုံပျက်ခေါ်တံဆိပ်, သင်သိသည် သာ. အပြစ်မ! စဉ်အတွင်းသူတို့ဆင်းရဲသားကိုစမ်းသပ်သူများနှင့်မသူကို 185 ကျောင်းသားများကိုပြောသည်ခဲ့သူ 35 ADHD ကျောင်းသားများကိုအကြားအချိန်ကိုက်စာမေးပွဲဖြေဆိုနေစဉ်စာဖတ်စွမ်းရည်ကိုစစ်ကြောစီရင် Psychoeducational အကဲဖြတ်များ၏ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခုအရ, တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်စမ်းသပ်-ယူပြီးစိုးရိမ်စိတ်၏ပမာဏနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု ဘတ်ရွတ်။ ဆင်းရဲသောသူကိုစမ်းသပ်သူများသူတို့ကိုယ်သူတို့ခေါ်တော်မူသောသူလေးတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့တံဆိပ်ကပ်ပေမယ့်စာမေးပွဲဖြေဆိုမီနှင့်ကာလအတွင်းသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုပြသခဲ့ပါဘူးသူကဲ့သို့တူညီသောစာဖတ်ခြင်း comprehension, ဒီကုဒ်ဒါ, အမြန်နှုန်းဝေါဟာရအသုံးပြုမှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းမဟာဗျူဟာသရုပ်ပြခဲ့သည်။ နှင့် စမ်းသပ်ခြင်းစိုးရိမ်စိတ် ကောင်းတစ်ဦးရမှတ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည်!
သင်ကိုယ်တိုင်တစ်ခုခုဖြစ်ယုံကြည်လျှင်, လေ့လာမှုများစာရင်းဇယားမဟုတ်ရင်သက်သေပြလျှင်ပင်, သင်ကဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ငါမူကားအထက်လေ့လာမှုမှာ "ဆင်းရဲသားကိုစမ်းသပ်သူများ" အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတံဆိပ်ကပ်သူကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုသူတို့ပြုသောအမှုဖွင့်သည်ကိုငါကြားအဖြစ်အံ့သြခဲ့ကြသည်သေချာပါတယ် "ကောင်းသောစမ်းသပ်သူများ!" သင်ဆင်းရဲသား tester နေနှစ်ပေါင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသည်င့်လျှင်, သငျသညျဆက်ဆက်သူတို့အားမျှော်လင့်ချက်မှတက်အသက်ရှင်လိမ့်မည်; သင်ကိုယ်တိုင်သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးရမှတ်ရနိုင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ရန်ခွင့်ပြုလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထို့နောက်သင်ကိုယ်သင်တက်ရိုက်နှက်သဖြင့်ရှိသည်မယ်လို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့အခွအေပါလိမ့်မယ်။ ယုံကြည်နှငျ့သငျအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်ငါ၏အဆွေ။
အချိန် Track သိမ်းဆည်းထားပါ
အကောင်းတစ်ဦးစမ်းသပ်-taker ဖြစ်လာဖို့နည်းလမ်းတွေတစ်ခုမှာသင်၏အချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး, စိုးရိမ်နိုးနိုးကြားကြား, ဒါပေမယ့်မဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်္ချာပါပဲ။ သင်စမ်းသပ်မှုရဲ့အစမှာသင့်ရဲ့အချိန်တွေနဲ့လည်းလစ်ဘရယ်သောကြောင့်သင်အဆုံးမှာအလျင်စလိုရန်ရှိသည်ဆိုပါကတစ်ဦးအောက်ပိုင်းရမှတ်ရတာပေါ့။ စမ်းသပ်မှုမပြုမီ, သငျသညျဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှုန်းရှိမည်မျှအချိန်တွက်ချက်ဖို့စက္ကန့်အနည်းငယ်ယူပါ။ ဥပမာ, သငျသညျ 60 မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန် 45 မိနစ်ရှိပါက, ထို့နောက် = .75 45/60 ။ 1 မိနစ် 75% မှ 45 စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအသီးအသီးမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ 45 စက္ကန့်ရှိသည်။ သင်ဖြေဆိုတစ်ဦးချင်းစီအချိန်ထက်ပိုမို 45 စက္ကန့်ကိုယူပြီးနေသတိထားမိလျှင်, သင်သူတို့အားနောက်ဆုံးမေးခွန်းများကိုသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်ပေးဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ရှိသည်မည်မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဝစာမေးပွဲရဲ့အဆုံးမှာရမှတ်ဆုံးရှုံးတာပေါ့။
သင်ကိုယ်တိုင်နှစ်ခုအဖြေရွေးချယ်မှုများအကြားရုန်းကန်နေနှင့်သင်မေးခွန်းကိုအချိန်ကန့်သတ်ကျော်ပြီးသားပါပဲ, မေးခွန်းပတ်ရှာပြီးအခြားသူများအပေါ်ကိုရွှေ့ခဲ့လျှင်, အရာအချို့ကိုလမ်းပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအဆုံးမှာအချိန်ရှိသည်ဆိုပါကခက်ခဲတဲ့တဦးတည်းမှပြန်လာပါ။
Long ကကျမ်းပိုဒ်ထိရောက်စွာ Read
Getty Images | tera Moore က
အကြီးမားဆုံးအချိန်ရေနုတ်မြောင်း၏အချို့နှင့်စမ်းသပ်မှုအပေါ်လျှော့ဂိုးသွင်းသူတို့အားရှည်လျားစာဖတ်ခြင်းကျမ်းပိုဒ်တို့ကိုအတိုင်းလိုက်နာသောမေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြသည်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်သူတို့ကိုထွက် Knock နှင့်သင်ကောင်းတစ်ဦးစမ်းသပ်-taker ဖြစ်လာဖို့လမ်းပေါ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလိုက်နာပါ:
ကျမ်းပိုဒ်နှင့်ဆက်စပ်မေးခွန်းများကိုမှတဆင့်သွားပြီးတစ်ဦးအထူးသဖြင့်လိုင်း, အပိုဒ်နံပါတ်, သို့မဟုတ်စကားလုံးရည်ညွှန်းဆိုဖြေပါ။ သငျသညျတစျခုလုံးအရာကိုဖတ်မတိုင်မီဟုတ်ကဲ့, ဒီဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါအနားသတ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပိုဒ် (Two-သုံးစကားများ) ၏အကျဉ်းချုပ်ရေးချ။
ပထမဦးဆုံးလွယ်ကူသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း - ချက်ချင်းအချို့သောမြန်ဆန်အချက်များရရှိရန်သငျသညျ -allows ကျမ်းပိုဒ်တစ်ဦးသောအဘို့ကိုရည်ညွှန်းသောသူတို့။ သငျသညျမသာကိုဖတ်ရှုအဖြစ်အရေးကြီးသောနာမ်နှင့်ကြိယာမှုကိုအလေးအနက်သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့် သင်ဖတ်ပြီးပြီဘယ်အရာကိုသတိရ သောကြောင့်လည်းသင်ပိုပြီးခက်ခဲမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းနေသည့်အခါရည်ညွှန်းဖို့တိကျတဲ့ရာအရပျကိုပေးသည်။ ထိုအခါမာဂျင်အတွက်စုစည်းတင်ပြရန်တခုလုံးအတွက်ကျမ်းပိုဒ်ကိုနားလည်ရန်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Plus အား, ကသငျသညျသူတို့အားဖြေကြားရန်ခွင့်ပြုသည် "ဘာအပိုဒ်2၏အဓိကစိတ်ကူးခဲ့တာလဲ" တစ်ဦးကို flash အတွက်မေးခွန်းအမျိုးအစားများ။
တစ်ဦးမျိုးစုံရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွင်, မှန်ကန်သောအဖြေကိုသငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌လက်ျာဘက်လည်းမရှိ။ သင်ပြုရန်ရှိသည်တစ်ခုတည်းသောအရာမှန်ကန်သောတဦးတည်းကို select အလားတူအဖြေကိုရွေးချယ်မှုများအကြားခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်။
"အစဉ်အမြဲ။ " "ဘယ်တော့မှ" ကဲ့သို့အဖြေတွေကိုအတွက်အစွန်းရောက်စကားလုံးများကိုရှာဖွေပါသို့မဟုတ် သူတို့ဤမျှလောက်များစွာသောမှန်ကန်သောထုတ်ပြန်ချက်များဖယ်ရှားပစ်လို့နဲ့တူစကားလုံးများကိုမကြာခဏအဖြေတစ်ခုရွေးချယ်မှု disqualify ပါလိမ့်မယ်။ လည်းဆန့်ကျင်ဘက်ထွက်သည် Watch ။ တစ်ဦးကစမ်းသပ်စာရေးဆရာမကြာခဏဂရုတစိုက်ဖတ်ပါရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ဖို့အလွန်ဆင်တူအသုံးအနှုန်း အသုံးပြု. သင်၏ရွေးချယ်မှုတစ်ဦးအဖြစ်မှန်ကန်သောအဖြေ၏အတိအကျကိုဆန့်ကျင်ဘက်ထားမည်။ လုံးလုံးလြားလြားကဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားနေအစား fit ရသောအဖြေကိုကြည့်ရှုရန်သင်္ချာမေးခွန်းများသို့မဟုတ်ဝါကျ၏ပြီးစီးမှုများအတွက်အဖြေကိုအတွက် Plug ။ သငျသညျပိုပြီးလျင်မြန်စွာကြောင်းလမ်းဖြေရှင်းနည်းကိုရှာဖွေပါစေ!
Lewandowski, လောရင့်, Gathje, ရေဗက္ကာအေ, Lovett, ဗင်္ယာမိန်ဂျေ, & ဂေါ်ဒွန်မိုက်ကယ်။ (2012) ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်အတူနှင့် ADHD မရှိရင်စမ်းသပ်မှု-ယူကျွမ်းကျင်မှု။ Psychoeducational အကဲဖြတ် 31 ဂျာနယ်: 41-52 ။
သူတို့ရဲ့ PSAT ရမှတ်များအတွက် Won ကပညာသင်ဆုများဖူးသူကားအဘယ်သူ6နာမည်ကြီးပြည်သူ့
3 အမျိုးမျိုးသင်ယူ Styles
ကောလိပ်ကျောင်းသားများ5ဟော့နောက်ဆုံးစာမေးပွဲသိကောင်းစရာများ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Savo ကျွန်းတိုက်ပွဲ
သင်ကမိုးလေဝသအခမ်းအနားကျင်းပစေချင် Make ပါလိမ့်မယ်ဒါက7ပွဲတော်များ
PGA Championship ပြိုင်ပွဲ Winners
အဆိုပါ Frisbee များ၏သမိုင်း
ခေါင်းဆောင်မှုသရုပ်ပြနမူနာ MBA ဘွဲ့ရထောက်ခံချက်ပေးစာ
Black ကသမိုင်းနှင့်အမျိုးသမီး Timeline ကို 1800-1859
အရာဝတ္ထုကိုနှိပ်ပါ / TListView အဘို့ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါတွင်အကောင်အထည်ဖော်
လျင်မြန်စွာနှင့်လွယ်ကူစွာချဉ်းကပ် - သင်၏ဆိုင်ကယ် Chain ပျော်စေ
ဟာဝိုင်ယီကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်နှိုင်းယှဉ်
Paleoenvironmental ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး - အတိအတွက်ရာသီဥတုလိုပဲအဘယျသို့ခဲ့သလား
Achilles '' ဖနောငျ့: မစုံလငျ Invulnerability ၏အန္တရာယ်
စပိန် preposition '' por '' ကိုသုံးပါရန်ကိုဘယ်လို
ကယျြဝနျးတက္ကသိုလ် - ဝဲအဆင့်လက်ခံရေး